Matanho manomwe anokosha eApple Watch | IPhone nhau
Iyo itsva Apple Watch inokonzeresa, uye inoratidza kuoma kwazvakaita kuwana chero modhi zvese muApple Chitoro online uye muzvitoro zvepanyama. Chikuru screen, nekukurumidza uye nyowani maficha iyo inofadza vashandisi kunyangwe kupfuura maPhones matsva.
Asi, iwe unoziva nzira yekuwana zvakanyanya kubva kuApple smartwatch? Nekuti pane mashandiro ayo vazhinji vasingazive uye ayo anotendera iwe kuwana zvirinyore kunyorera kana kuita mabasa nekukurumidza uye nyore. Isu tinokuratidza iwo akanakisa manomano ekushandisa yako Apple Watch, nyowani kana yekare, kushandisa mukana wayo kugona.
Mamwe emabasa atinoratidza muvhidhiyo anga atovapo mushanduro dzakapfuura dzeWatchOS, mamwe matsva muWatchOS 5, mamwe anoshandira mamodheru ese eApple Watch uye mamwe ndeeChikamu 3 ne4. mabasa aunofanira kuziva kuti uashandise kana kufunga kuti unofanirwa kutovandudza yako Apple Watch.
Mabasa anotsanangurwa muvhidhiyo ndeaya anotevera:
Rongedzazve iyo Center Center: watchOS 5 inokutendera kuti ugadzirisezve mabhatani eControl Center kuti uise iwo aunonyanya kushandisa uye nekudaro anoita kuti vawanikwe.
Kutungamira kuwana kune ekumashure ekushandisa: maapplication anomhanya kumashure senge mimhanzi inoridza kana iyo Chiitiko application inogona kuvhurwa nekukurumidza nekudzvanya pane diki icon inoonekwa pachiratidziri.
Vhara mapurogiramu: Apple Watch maapplication haavhare, asi kana tichida, tinogona kuvamanikidza kuti vavhare kana paitika tsaona kana kushanda zvisina kujairika zvakafanana.
Dock: inogadzirisika kuitira kuti maficha aunofarira aunosarudza kana ekupedzisira awakavhura aoneke, ibasa rinokupa mukana wekukurumidza kune iwo maapplication aunofanira kuziva.
Rongedza mapurogiramu- Unogona kuronga zviratidzo zvekushandisa kubva kuApple Watch kana kubva kuApple application.
Emergency kufona- Apple Watch inokupa iwe kugona kufona kune ve emergency mabasa kana iwe uchida.
Shevedza Siri: nekukasira iwe unogona kuita izvozvo nekungotenderedza ruoko rwako iwe unogona kupa mairairo kuna Siri pasina kutaura kuti "Hei Siri" zvisati zvaitika
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Matanho manomwe anokosha eApple Watch